Peppermint 6, inowedzera minty distro | Linux Vakapindwa muropa
Mayo zvinosuruvarisa kuti haana kutipa iyo nyowani vhezheni yeinonyanya kuzivikanwa minty distro, asi yakatipa diki minty sampu. Pakupera kwemwedzi uno takaziva Peppermint 6, yakakurumbira kugoverwa kweGnu / Linux nekuda kwezvishoma zviwanikwa zvinoshandiswa nekombuta.
Mukukosha, kushanda kwePeppermint kwakafanana neChannel OS saka haidi zviwanikwa zvakawanda uye kana tikawedzera kune iyi Lxde, Ubuntu 14.04 uye nemamwe marudzi esoft software, mhedzisiro yacho inopfuura inoshamisa. Asi chinhu chakakosha nezve Peppermint 6 hachisi ichi asi shanduko dzawakaita.
Peppermint 6 inosanganisira iyo 3.16 kernel uye yakagadziridzwa grafiki stack. Iyo yakavakirwa paUbuntu 14.04 asi pane akati wandei nongedzo uye mapoinzi akananga kuUbuntu 14.02, chimwe chinhu chatove chakakosha. Asi Ubuntu haisi Peppermint 6's system yesarudzo asi Linux Mint. Nekudaro, iyo maneja wefaira ichave Nemo uye kwete Nautilus. Iyo software maneja ichave Mintupdate uye kwete iyo Ubuntu yekuvandudza maneja uye Mintstick ichave isipo muPeppermint 6.
Peppermint 6 inosanganisira MintUpdate uye Shakura nekutadza
Iyo yekupedzisira mune iyi nyowani vhezheni ichatsiviwa naSakura. Mamwe mapurogiramu akati achatsiviwa, kwete LXTerminal chete, pakati pezvinonyanya kuzivikanwa ichave VLC, inozove iri default chirongwa cheaudio nemavhidhiyo kana EOG Image Viewer. Peppermix ichave nharaunda nyowani iri muPeppermint 6, nharaunda nyowani inosanganisira theme yedesktop, maikoni, mapikicha, nezvimwe ... Iyi nharaunda ichave nerima vhezheni senge mamwe ese akakurumbira madingindira.
Peppermint inogoverwa zvakanyanya kune mamwe makondinendi senge Africa, saka iyi vhezheni itsva yakakosha uye inozivikanwa. Nekudaro, izvi zvinogona chete kuzivikanwa nekuyedza kugovera iwe pachako sezvo akasiyana Hardware aripo izvozvi akakurisa. Saka kana iwe uine komputa yekare kana iwe uchingoda kuyedza mumushini chaiwo, ndinokurudzira izvi peji kwaunogona kuwana iyo diski mifananidzo yekuiisa. Ehezve haisi Linux Mint asi chimwe chinhu menthol inayo, haufunge?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Peppermint 6, inowedzera minty distro
Urarame Wallpaper, mifananidzo yemifananidzo muGNU / Linux